Ngwa a, ị gaghị echefu Poké Ball na Pokémon Go | Akụkọ akụrụngwa
A ga-echeta oge ọkọchị nke 2016 dịka oge ọkọchị dị egwu nke Pokémon Go. Egwuregwu ahụ na-erute ọkwa niile nke ewu ewu na echiche mmụọ nke anyị nwere ike iche n'echiche. Ọzọkwa, a na-ebipụta akwụkwọ ego a na-akpọ Pokémon, yana oke ọhịa nke ngwa ndị gbara ya gburugburu. Na ngwa a, Gaghị agbaghara Poké Ball na Pokémon Go, ọ na-etinye aka na ngwaọrụ mkpanaka ma na-enye anyị ohere ịmalite Poké Ball mgbe niile n'ụzọ zuru oke, ka ị ghara ịdọpụ uche wee hapụ mwepụta ahụ. Ga-echekwa oge, njem na ndidi na ya.
Ọzọkwa, 3D rụrụ ọrụ ebube ahụ, ihe dị mma banyere ndị na-ebi akwụkwọ a bụ na ha na-ekwe ka onye ọrụ ọ bụla mepụta ụdị obere ngwaọrụ ndị na-eme ka ịchụ nta Pokémon dị mfe, yabụ ndụ (ma ọ dịkarịa ala ọtụtụ na-aga ya. ..). Na aghụghọ bụ na Ngwa a na - enye gị ohere ịmegharị mkpịsị aka gị n'otu ụzọ, dịka onye ndu, ya mere, i kwesịghị ịda ada n'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ ezie na ị maghị. Ngwa e mepụtara site na Jon Cleaver ma nwee ike idozi ya na iPhone 6 na iPhone 6s, anyị ga-ahapụ gị na ala nke post njikọ maka eserese nke mbipụta 3D kwekọrọ na nke a «ikpe».
Enweghị Poké Bọọlụ ole na ole mụ onwe m tụfuru n'ihi ọnọdụ ma ọ bụ mmetụta dị njọ, nke a agaghị eme gị ọzọ, ọ bụ oge iji nweta ohere ọ bụla. O doro anya na nke a Ọ ga - azọpụta gị ọtụtụ njem gaa PokeStops iji nwetaghachi ammo. Pokémon Go fever na-eru oke, ruo n'ókè nke na anyị ga-ahazi ngwaọrụ anyị ka anyị wee ghara ida Pokémon ahụ a na-eche ogologo oge nke edebeghị aha na Pokedex anyị. Jiri ezigbo mbipụta 3D a mee ihe.
3D bipụta map nke ndu iji tụba bọọlụ Poké
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Na ngwa a, ị gaghị agbaghara Poké Ball na Pokémon Go
Zaghachi na Alelex Pazos
Jabilbreak maka iOS 9.2-9.3.3 dị ugbu a